AB သွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့သိထားသင့် – Trend.com.mm
AB သွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေတော့သိထားသင့်
Posted on October 6, 2018 October 4, 2018 by Noel
သင့်ချစ်သူက AB သွေးပိုင်ရှင်လား? ဒါဆိုရင်တော့ သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။AB သွေးကရှားပါးသွေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်…
AB သွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူကို အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ပြီးချစ်တတ်ကြသလို သူတို့ကိုမင်းသမီးလိုပြန်ပြီး ဆက်ဆံပြုမူတာကိုသဘောကျကြပါတယ်။ဥပမာ အမှတ်တရနေ့လေးတွေမှာသူမအတွက် ထူးထူးခြားခြားဖန်တီးပေးတာမျိုးပေါ့။ဒါ့အပြင် AB သွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးတွေဟာအချစ်ရေးတစ်ခုမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တာ၊သူတို့လိုချင်တာကိုလည်းတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် အသေးစိတ်ကအစသေချာဂရုစိုက်ပေးတတ်ကြလို့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ အမေနဲ့တူတဲ့ ချစ်သူမျိုးပါ။
သူတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိကြသလိုသူတို့ရဲ့စိတ်က ချစ်သူကို
သ၀န်တိုစိတ်နဲ့သူမဆီကထွက်မသွားအောင်အမြဲဂရုစိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူတို့ရဲ့ Type ကိုက ချစ်တဲ့သူကိုဂရုစိုက်ပေးချင်တဲ့ Type မျိုးပါ။သူတို့စိတ်က အရမ်းရိုးစင်းပါတယ်။ဒီလိုဖြူစင်သလို သူတို့က စစချင်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့ တကယ့်စိတ်ရင်းအမှန်ကိုဖွင့်လှစ်မပြတတ်ပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူတူရှိတာကြာမှ တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုသိလာရတာပါ။
AB သွေးလေးတွေဟာစိတ်တည်ငြိမ်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါအလိုက်သူတို့ရဲ့ စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ဥာဏ်လည်းကောင်းပါတယ်။အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ အလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးပေးတတ်တာပါ။သူတို့ဘက်က အလေးထားသလောက်တစ်ဖက်လူဆီက ပြန်ပြီးအလေးထားခြင်းမခံရတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်အားငယ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်တယ်ပြောရမလား၊အရမ်းချစ်တတ်တယ်ပြောရမလား သူတို့က အချစ်ရေးတစ်ခုမှာအသေးစိတ်ကအစ အလေးထားတန်ဖိုးထားတတ်သလို သူတို့ရဲ့ချစ်သူအတွက်လည်းအမြဲအမှတ်ရစရာတစ်ခုခုဖန်တီးပေးတတ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့သူမကလည်း အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးဂရုစိုက်ခံချင်၊တန်ဖိုးထားခံချင်ကြပါတယ်။သူမကိုဂရုစိုက်ပေးမယ်၊အလေးထားမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချစ်ရေးက အကြာကြီးမြဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူက AB သွေးလေးဆိုရင်သူမရဲ့ အသေးစိတ်ဂရုစိုက်တာကို ချုပ်ချယ်တယ်၊ကျဉ်းကျပ်တယ်မမြင်ပဲ သူမကိုလည်း အဲ့ဒီလိုလေးပြန်ပြီးဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။သူမအတွက် အမှတ်တရနေ့လေးတွေဖန်တီးပေးပါ။သူတို့ကလည်းသင့်အပေါ် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ပြီးချစ်သွားတတ်တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်လို့တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ပေးပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
သငျ့ခဈြသူက AB သှေးပိုငျရှငျလား? ဒါဆိုရငျတော့ သူမရဲ့ ပငျကိုယျစိတျအခွအေနလေေးကိုသိထားဖို့လိုအပျပါတယျနျော။AB သှေးကရှားပါးသှေးလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ရဲ့ စိတျနစေိတျထားကလညျးထူးခွားနတေတျပါတယျ။ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုရငျ…
AB သှေးပိုငျရှငျမိနျးကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ ခဈြသူကို အကောငျးဆုံးပေးဆပျပွီးခဈြတတျကွသလို သူတို့ကိုမငျးသမီးလိုပွနျပွီး ဆကျဆံပွုမူတာကိုသဘောကကြွပါတယျ။ဥပမာ အမှတျတရနလေ့ေးတှမှောသူမအတှကျ ထူးထူးခွားခွားဖနျတီးပေးတာမြိုးပေါ့။ဒါ့အပွငျ AB သှေးပိုငျရှငျမိနျးကလေးတှဟောအခဈြရေးတဈခုမှာသူတို့ဖွဈခငျြတာ၊သူတို့လိုခငျြတာကိုလညျးတိတိကကြသြတျမှတျထားတတျကွပါတယျ။ကိုယျ့ခဈြသူအတှကျ အသေးစိတျကအစသခြောဂရုစိုကျပေးတတျကွလို့ စိတျကဉျြးကပျြတာတှလေညျးဖွဈတတျတယျဆိုပမေဲ့ ဒီမိနျးကလေးတှဟော အမနေဲ့တူတဲ့ ခဈြသူမြိုးပါ။
သူတို့ဟာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျမှုလညျးအပွညျ့ရှိကွသလိုသူတို့ရဲ့စိတျက ခဈြသူကို
သဝနျတိုစိတျနဲ့သူမဆီကထှကျမသှားအောငျအမွဲဂရုစိုကျနတောမြိုးမဟုတျပဲ သူတို့ရဲ့ Type ကိုက ခဈြတဲ့သူကိုဂရုစိုကျပေးခငျြတဲ့ Type မြိုးပါ။သူတို့စိတျက အရမျးရိုးစငျးပါတယျ။ဒီလိုဖွူစငျသလို သူတို့က စစခငျြးမှာတော့ သူတို့ရဲ့ တကယျ့စိတျရငျးအမှနျကိုဖှငျ့လှဈမပွတတျပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူတူရှိတာကွာမှ တဖွညျးဖွညျးသူတို့ရဲ့စိတျကိုသိလာရတာပါ။
AB သှေးလေးတှဟောစိတျတညျငွိမျပွီး အခွအေနအေခြိနျအခါအလိုကျသူတို့ရဲ့ စိတျကိုပွောငျးလဲနိုငျစှမျးလညျးရှိပါတယျ။ဉာဏျလညျးကောငျးပါတယျ။အားနညျးခကျြတဈခုကတော့ အလှယျတကူလကျလြှော့အရှုံးပေးတတျတာပါ။သူတို့ဘကျက အလေးထားသလောကျတဈဖကျလူဆီက ပွနျပွီးအလေးထားခွငျးမခံရတဲ့အခါ အရမျးစိတျအားငယျတတျပါတယျ။စိတျကူးယဉျဆနျတတျတယျပွောရမလား၊အရမျးခဈြတတျတယျပွောရမလား သူတို့က အခဈြရေးတဈခုမှာအသေးစိတျကအစ အလေးထားတနျဖိုးထားတတျသလို သူတို့ရဲ့ခဈြသူအတှကျလညျးအမွဲအမှတျရစရာတဈခုခုဖနျတီးပေးတတျကွပါတယျ။ပွီးတော့သူမကလညျး အဲ့ဒီလိုပွနျပွီးဂရုစိုကျခံခငျြ၊တနျဖိုးထားခံခငျြကွပါတယျ။သူမကိုဂရုစိုကျပေးမယျ၊အလေးထားမယျဆိုရငျ အဲ့ဒီအခဈြရေးက အကွာကွီးမွဲသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူက AB သှေးလေးဆိုရငျသူမရဲ့ အသေးစိတျဂရုစိုကျတာကို ခြုပျခယျြတယျ၊ကဉျြးကပျြတယျမမွငျပဲ သူမကိုလညျး အဲ့ဒီလိုလေးပွနျပွီးဂရုစိုကျကွညျ့ပါ။သူမအတှကျ အမှတျတရနလေ့ေးတှဖေနျတီးပေးပါ။သူတို့ကလညျးသငျ့အပျေါ အကောငျးဆုံးပေးဆပျပွီးခဈြသှားတတျတဲ့သူမြိုးတှဖွေဈလို့တနျဖိုးထားပွီးခဈြပေးပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။